Waa kuma shaqsiga qaban-doona Kursiga hadii la rido Guddoomiye Dhoobo-daareed ? – Idil News
Waa kuma shaqsiga qaban-doona Kursiga hadii la rido Guddoomiye Dhoobo-daareed ?
Posted By: Jibril Qoobey November 7, 2019
Xildhibaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo loo yaqaan (Abwaan Cabdirashiid) ayaa loo saadaalinaya in uu beddelo guddoomiyaha Baarlamanka Puntland, haddii uu xilka banneeyo Cabdixakiin Dhoobo, sida ay sheegayaan xeel-dheerayaasha falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland.
Abwaan Cabdirashiid ayaa kamid dadkii u tartamay doorashadii guddoomiyaha Baarlamanka Puntland, 4-Jannaayo ee sannadkan oo uu ku guulaystay Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo) , inkastoo Mr Jibriil uu xiligaasi helay 5-cod oo keliya.
Marka laga reebo hadal-haynta falanqeeyaasha siyaasadda ee la xiriirta in Abwaan Cabdirashiid u sharraxanyahay xilka guddoomiyaha golaha wakiilada, haddana ma jirto meel uu xildhibaankaasi weli ku xaqiijiyay in uu sharraxanyahay iyo xataa meel uu ku beeniyay midna.
Abwaan Cabdirashiid oo agaasimaha xafiiska Warfaafinta Puntland soo noqday xilligii madaxweyne Gaas, ayaa lagu tilmaamaa nin galaan-gal iyo saamayn xooggan ku leh arrimaha gobolka Sanaag.